Mick Jagger waa uu caafimaad qabaa qaliinka wadnaha ka dib: warbixinta - dadka - TELESKA RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE » Mick Jagger en bonne santé après une opération cardiaque: rapport – people
Mick Jagger en bonne santé après une opération cardiaque: rapport – people
Riix halkan haddii ay dhibaato kaa haysato fiirinta sawirada qalabka mobile
Mick Jagger ayaa u muuqda inuu si fiican u shaqeynayo - ka dib marka la raaco habka daaweynta ee wadnaha wadnaha ee ku qasbay Rolling Stones inay dib u dhigto booqashadooda Waqooyiga Ameerika.
Cayaartu waxay ku jiri doontaa "caafimaad fiican", ayuu yiri ilware boor .
"Dhakhaatiirtu waxay ahaayeen awoodi karaan inay galaan xidho khaanadaha wadnaha ee Jagger uu halbowle bidig iyo kormeerayaasha hadda waa hogaamiyaha Stones Rolling uga digaan wixii dhibaatooyin ah ee abuurma in dacwadda, oo ay ku jiraan dhiigbaxa saa'idka ah," ayaa sheegay in boor.
The Rock of Roll Hall of Famer, oo leh 75, "waa in lagu nastaa afar illaa shan maalmood si uu u bogsado iyada oo aan jirin dhibaatooyin dhiig-baxa ah," ayaa lagu sheegay Billboard. "Waxay noqon kartaa maalmo yar, laakiin waxay qaadan doontaa wakhti yar ka hor inta aysan soo laaban marxaladda"
Warbixinta dalxiiska ayaa lagu dhawaaqay todobaadkan bogga internetka ee Stones.
"Nasiib darro maanta Stones Rolling uu ku dhawaaqay dib udhigista oo timir ah safar ay soo socda ee Maraykanka iyo Canada - waxaan raali carqalad kasta oo sababa in ay kuwa tikidh riwaayada jecelyihiin inay ku Xasisho taageerayaasha ku saabsan tikidhada hadda jira, maaddaama ay ansax noqonayaan bilihii hore. Taariikhaha la soo sheegey, oo lagu dhawaaqi doono wax yar, "ayaa lagu yiri bayaan.
Xayiraadda ayaa muujisay in sababta dib u dhigis uu ahaa Jagger caafimaadkiisa, laakiin ma uusan sheegin waxa ku dhaawacmay ninkii hogaaminayay.
"Mick waxaa lagu wargeliyay dhakhaatiirta inuusan u socon karin socdaalka sababtoo ah wuxuu u baahan yahay daaweyn caafimaad. Dhakhaatiirtu waxay ku wargeliyeen Mick in uu si buuxda u soo kabsado si uu ugu laabto goobta sida ugu dhakhsaha badan, "ayaa lagu yiri bayaan.
La sii daayay ayaa waxaa ku jira jagad ka socota Jagger, taageerayaal jinsiyad ah oo dib u dhigay dib u dhiska.
"Runtii waan ka xumahay dhamaan taageerayaasha aan ku ciyaareyno America iyo Canada tikidhada, waxaan runtii necbahay inaan kuu soo daayo sidaan oo kale. Dhibaatada dib u dhigis ayaan dib u dhigayaa, laakiin si aad ah ayaan u shaqeyn doonaa si aan ugu laabto waddada sida ugu dhakhsaha badan. Mar labaad, waxaan raali gelinaynaa qof walba, "ayuu yiri Jagger.
Dib u dhigista safarka ayaa ka soo horjeeda taageerayaasha Bay Area, Stones ayaa la filayaa inay galaan Garoonka Levi ee Santa Clara May 18.
Sida laga soo xigtay fariin ka timid Levi's website: "Dhiirrigeliyayaasheena AEG Soo-Bandhigyada / Galbeedka Ciyaaraha waxay kugula talinayaan dadka tikidhada ah in ay dhigtaan tikidhada si ay u haystaan ​​tikidhada hore, maaddaama ay ansaxin doonaan taariikhaha la sheegay."
Dadka: "Waxay ahayd qalabkii noloshayda": Mike Horn oo kalsooni ku qabta xaaskiisa oo la waayay
Toulouse. Maqaarka hilibka lo'da, lafdhabarka ... makhaayadda "The Coast and the Ridge" ayaa dib u furaya albaabadeeda